अस्पताल मै प`त्नीको जन्म दिन मनाए गायक प्रमोद खरेलले !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/अस्पताल मै प`त्नीको जन्म दिन मनाए गायक प्रमोद खरेलले !!
उनले फेसबुकमा पत्निलाई फुल दिएको तस्बिर शेयर गर्दै भनेका छन् – असार १५ , उनको जन्मदिन, तर… …सधै जस्तो छैन यो असार १५ ,उनी CCU मा छिन्। नियतीले यसपाली अस्पतालको CCU कक्षबाटै उनको जन्मदिन मनाउदैछौं ।
स्वास प्रस्वास समस्या भएपछि छोरी जन्मेर सिधै NICU गइन्। जन्मेको ६ दिन पछि मात्र NICU बाट छोरी लाइ निकालेर भेट्न पाएकी उनी आफै फेरि १२ औं दिनमा CCU पुगिन । सुत्केरी अवस्थामा हुने घातक postpartum cardiomyopathy ले आक्रमण गरेपछि मुटुको मुटुले राम्रो काम गर्न नसकेर इमरजेंसी अल्का हुदै मनमोहन मुटु अस्पतालमा गम्भिर अवस्था मा पुगिन। तर अहिले धेरै सुधार छ ।